Q စင်တာကို ဝင်ရမယ်ပြောပြီး လာမခေါ်တော့တဲ့အဖြစ် (စည်းကမ်းတွေက စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိတော့တာလား?) - Zet Star
Q စင်တာကို ဝင်ရမယ်ပြောပြီး လာမခေါ်တော့တဲ့အဖြစ် (စည်းကမ်းတွေက စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိတော့တာလား?)
Q စင်တာကို ဝင်ကို ဝင်ရမယ်ပြောပြီး လာမခေါ်တော့တဲ့အဖြစ် (စည်းကမ်းတွေ အမိန့်တွေက စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိတော့တာလား?)
Contact မှန်သမျှ Q ထည့်တဲ့စနစ်ကြီးကို အခုမှ လျော့မလိုလိုပြောလာလို့
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့အမေက P ဖြစ်သွားတော့ primary contact ဖြစ်တဲ့သူကို Q ထည့်မယ်ပေါ့။ ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ သူ့အမေ N ပြန်ဖြစ်ပြီးမှ သူ့ကို Q ထည့်မယ်ဆိုပြီးပြောသတဲ့။ အော်အေး ကြားထဲမှာ ကူးမယ်ဆိုကုန်နေပြီ။
အိုကေ Q ထည့် နောက်ကျတာထားအုံး။ Home Q လုပ်မယ်ဆိုပြီး တောင်းဆိုတာ လက်မခံဘူး Facility Q ထည့်ကိုထည့်မှာဆိုပြီး ပြောသတဲ့၊ နောက်ဆုံးထည့်ချင်ထည့်ကွာ လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ ပြန်လာခေါ်မယ်ဆိုပြီး ၃-၄ ရက် လာကိုမခေါ်ဘူးတဲ့ (နောက်လဲ လာမခေါ်ဘူးထင်ပါတယ်)။ တကယ့်ဟာသရယ်။
အဲ့ဒါ ကိုယ်သိတာ တစ်ယောက်ပဲရှိသေးတာနော်။ ဘယ်လောက်တောင် အဲ့လို ပေါက်ကရတွေ အောက်မှာဖြစ်နေတယ်မသိဘူး။
အဲ့လိုလွတ်နေတဲ့ သူတွေဖြန့်တာ ဘယ်လောက်များနေလိုက်မလဲ။ သူများကို မကူးအောင် နေထိုင်ဖို့ ဘာပညာပေးမှလဲ မလုပ်ခဲ့ဘူးနော် ဒီအတိုင်းပစ်ထားတာ။
မနိုင်မနင်း Facility Q မယ့်အစား Home Q လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတကျနဲ့သာ သေချာလုပ်ရင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလဲ ဝန်လျော့သွားမယ်၊ ရောဂါဆိုးတဲ့သူတွေကိုလဲ ပိုဂရုစိုက်နိုင်မယ်၊ ခိုးဖြန့်သလိုဖြစ်နေတာတွေကိုလဲ လျော့ချနိုင်မယ်
မြန်မာနိုင်ငံက အရင်ကတည်းက ထိန်းဖို့မနိုင်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ စည်းကမ်းတွေထုတ်နေတာ အကျင့်ပါနေလို့လားမသိဘူး။ ထုတ်လိုက်ရင် စာရွက်ပေါ်သာဖတ်ကောင်းတာ တကယ်လိုက်မထိန်းနိုင်တာချည်းပဲများတယ်။
Feasibility study ဆိုတာလေး သေချာသင်ပေးလိုက်ကြပါအုံး အဲ့ဒီ အမိန့်ထုတ်နေကြတဲ့သူကြီးတွေကို။
← ထီသိန်းတထောင်ဆု ပေါက်သည့် ချင်းအမျိုးသားကြီး ဆုငွေအားလုံး မိန်းမဆီအပ်မည်ဟုဆို
မလိုတဲ့ ထောက်ခံစာတွေကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ အလွဲကြီးလွဲနေတဲ့ ကိုဗစ်ကင်းကြောင်း ထောက်ခံစာ →